डेंगुले थलिएका ३ वरिष्ठ (भिडियो रिपोर्ट) | Kendrabindu Nepal Online News
२६ भाद्र २०७६, बिहीबार १७:०९
देशका ५६ जिल्लामा फैलिएको डेंगुको प्रकोपले अहिलेसम्म ६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । सरकारले साउन १ गतेदेखि भदौ २२ गतेसम्म ३ हजार ८९९ जनामा डेंगुको संक्रमण देखिएको जनाएको छ । जस अनुसार प्रदेश १ मा ८३१ जना, प्रदेश २ मा ३९ जना, प्रदेश ३ मा २०१० जना, गण्डगी प्रदेशमा ८९६ जना, प्रदेश ५ मा ९७ जना, कर्णाली प्रदेशमा ३ जना र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा २३ जनामा डेंगुको संक्रमण देखिएको हो ।
चिकित्सकहरूले भने देशभर करिव ७० हजारभन्दा बढीलाई संक्रमण भएको हुनसक्ने अनुमान गरेका छन् । डेंगु संक्रमितमध्ये १० प्रतिशतमा लाक्षणिक र बाँकी ९० प्रतिशतलाई सामान्य ज्वरो हुने भएकाले समग्रमा ७० हजारको हाराहारीमा संक्रमित भएको आँकलन गरिएको हो । पोखरामा पनि ५ जना प्रहरी र १० जना स्वास्थ्यकर्मीसहित करिब ५ सय जनामा डेंगुको संक्रमण देखिएको छ ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा अहिले बिरामीहरूको चाप दिनहँु बढिरहेको अस्पतालका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले जानकारी दिए । नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पनि डेंगुको आशंका गरिएको छ भने शुक्रराज अस्पतालका लालबहादुर वाइवा, शारदा दाहाल, रवीन्द्र अर्याल डा. असीम कँडेल र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कार्यरत फिरोज महर्जन, लक्ष्मी अधिकारी र सीताराम भण्डारीलाई पनि डेंगु संक्रमण भएको छ । टेकुमा मात्रै १३ स्वास्थ्यकर्मीलाई डेंगु संक्रमण भएको अस्पतालले जनाएको छ  । अस्पतालले डेंगुका बिरामीका लागि दुईवटा वार्ड नै छुट्ट्याएको छ । सो अस्पतालमा अहिले डेंगुका १३ जिल्लाका ६० बिरामी भर्ना भएर उपचार गराइरहेका छन् । देशभरका स्वास्थ्य संस्थाको डेंगुको आशंकामा जचाउँन जानेहरूको संख्या बाक्लो छ । उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले मन्त्रालय एक्लैले डेंगु नियन्त्रण गर्न नसकिने बताइसकेका छन् ।
डेंगुबाट सर्वसाधारण मात्रै होइन स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी, सांसददेखि मन्त्री समेत थलिएका छन् । को को हुन् त डेंगुले थलिएका वरिष्ठहरू ?
Prevविदेशी ज्वाइँलाई अंगीकृत नागरिकता दिन सक्दैनौंः सरकार
भारतीय विदेशमन्त्रीलाई कम महत्व दिएको भन्नेलाई सञ्चारमन्त्रीको यस्तो जवाफNext